Isku-darka Sheybaarka Sheybaarka Jarmalka: Eyga Reerka Adduunka Ugu Fiican? - Taranka
Isku darka Shepherd Lab Lab waa maxaa dhacaya markaad ka gudubto eeyga Ameerika ee deriska ah, Labrador Retriever, oo leh Adhijirka Jarmalka ee adduunka ugu caqliga badan?
Mid ka mid ah eeyaha ugu fiican ee saaxiibtinimada qoyska leh, noocani iskutallaabtu waa mid daacad ah, caqli badan, ciyaar badan oo tusaysa milkiilayaasheeda xaddi jacayl aan xad lahayn. Waxa kaliya ee ay ugu baahan tahay soo noqosho waa qaddar fara badan oo jimicsi madadaalo leh.
Sheprador (sidoo kale loo yaqaan 'Shepherd Labrador German mix') waa eey dhexdhexaad ah oo weyn oo leh indho qurux badan oo bunni ah, iyo kala duwanaanta muuqaalka jaakadda iftiinka ilaa mugdiga.
Ma u qalantaa Aynu galno hagaha milkiilayaasheena.
Soo Koobida Macluumaadka Macluumaadka Isku-darka Shepherd Lab
Ujeedo Eyga Qoyska
Ku Haboon Qoysaska banaanka u baxa oo firfircoon
Cabir 22 illaa 26 ”(lab) ama 20 illaa 24” (dheddig)
Miisaanka 45 - 95 lbs (lab) iyo 35 - 45 lbs (dumar)
Nolosha qofka 10 ilaa 12 sano jir
Kala duwanaanta Midabka Tan, bacaad, bunni iyo madow
Dabeecad Caqli badan, jacayl badan, ciyaar badan, firfircoon oo daacad ah
Jimicsi Maalinle ah Sare - Sida la doorbidayo 90 - 120 daqiiqo maalin kasta
Isticmaalka Cuntada Maalinlaha ah Saddex ilaa afar koob oo tayo sare leh kibble maalinle ah
Arimaha Caafimaadka ee Layaqaan Dysplasia iyo volvulus dilation gastric (ubax)
Guudmarka Taranka Lab Shepherd Lab Isku Darka Guud
Jarmalka Shepherd Lab Mix Puppies
Shepherd Mix Lab Temeperamnet iyo Dabeecad
Sida Loo Daryeelo Lab Sheybaarka Shepherd Lab
Tababbarka Isku-darka Sheybaarka Sheer-Jarmal
Muuqaalka Shepherd Lab Sheer Lab ah
Magaca Sheprador waxaa loo bixiyay eey ay waalidkiis yihiin daahir Jarmal Shepherd iyo Labrador Retriever
Laba ka mid ah noocyada adduunka ugu caansan ayaa isu yimaada oo na siiya nooc ey cusub oo naqshadeeye ah. An abid sidaa u geesinimo badan, caqli badan iyo adhijir Jarmal xoog leh asxaabta leh ciyaarta, firfircoonaanta iyo aad u jecel, Labrador .
Jiilka koowaad ee Jarmalka Shepherd Lab Mix eey ah, oo ka soo jeeda waalidkiisa asal ahaan ka soo jeeda Jarmalka Shepherd iyo Labrador Retriever, ayaa kaliya ku kici doona qiyaastii $ 200 ilaa $ 600 USD.
Sheprador maahan nooc qaali ah maaddaama aysan wali soo qaadin caan sida kuwa kale eeyaha naqshadeeyaha ah sida qaaliga ah hadana xayawaanka yar Cavachon .
Qiimaha noocani wuu ku kala duwanaan doonaa mid ka mid ah kan wax soo saara ilaa kan wax soo saara laakiin waxaa amaan ah in la yiraahdo caafimaadka badan ee waalidku yeesho, ayaa qaalibka cunuggu u qaalisan yahay.
Qashin kastaa wuu kala duwanaan karaa iyadoo waalidkood inta badan ku badan yahay muuqaalka. Cabbirka qashinka wuxuu ku kala duwan yahay min lix ilaa toban dhallaan yar yar celcelis ahaan.
Ma jiro taariikh cayiman oo loo cayimay goorta iyo halka markii ugu horreysay la dhalayay noocyadan cc Si kastaba ha noqotee, maadaama labadaba Shepherd-ka Jarmalka iyo Labrador Retriever ay yihiin noocyo caan ah markaa waxay u dhowdahay in muddo ah.
Adhijirka Jarmalka ayaa ka mid ah eyda adduunka ugu caansan . Waxay asal ahaan ka soo noqdeen ey eey ka shaqeeyaan Jarmalka 1899.
Labrador Retriever sidoo kale waa nooc caan ah oo caan ka ah adduunka oo dhan wuxuuna ka yimid bartamihii illaa dhammaadkii 1830-kii magaalada Newfoundland oo ku taal Boqortooyada Ingiriiska.
Maanta, labada noocba waxay caan ku yihiin dabeecad caqli iyo daacadnimo labaduba waxay xadaan labada dhibic ee ugu sarreeya eeyaha eyda ugu caansan adduunka.
Afarta erey: Eyga qoyska oo qumman.
Waa la dhihi karaa, si hubaal ah, in noocani isku dhafan yahay mid ku habboon qoys kasta. Waxay yihiin saaxiibbo aan caadi ahayn, daacad ah oo is jecel. Ilaa iyo inta ay tababaran yihiin, jimicsadeen oo ay si sax ah u dhexgaleen bulshada dhexdeeda, markaa waa inaadan wax dhibaato ah ku qabin bakhaarkan jecel.
Cambaarayn ayaa ku hareeraysan mid ka mid ah waalidnimada, Adhijirka Jarmalka, laga bilaabo isticmaalkooda eeyo militari intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Dabeecadda dabeecadeed ee gardarrada waxay badanaa la xiriirtaa GSDs. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo laga ilaaliyo dabeecadda, tarankaani waa eey dagaal badan .
Haddii lagu barbaariyo jawi caafimaad qaba, oo si wanaagsan loola dhaqmo, markaa ardaygu guud ahaan wuu soo bandhigi doonaa ma laha calaamado gardaro ah . Isla sidaas ayaa loo dhihi karaa Jarmalka Shepherd Lab Mix.
Way ku fiican yihiin carruurta sababo la xiriira shakhsiyaddooda ciyaar iyo firfircoon. Si kastaba ha noqotee, tani maahan nooca eyga saxda ah ee qoys caajis ah ama milkiile; waxay u baahan yihiin qaddar cadaalad ah oo hawl maalmeed ah. Haddii aysan helin kicinta saxda ah, iyo jimicsiga, markaa waxay noqon doonaan caajis iyo burburin guriga dhexdiisa ah. Marka haddii aad caajis tahay, ama aad dhif tahay guriga, ka dib filo inaad ku soo noqoto aag dagaal oo aad fadhido fadhiga.
Iyagu waa nooc caqli badan sidaa darteed hubi inaad ula dhaqanto iyaga sidii mid uun. Tuur cudulo xoogaa ah intaad ku jirto. Jacaylka iyo caqliga tarankaani waa mid ku habboon qoys kasta oo xajmi ah.
Isku-darkaaga Shepherd Lab ee Jarmalka ah ayaa laga yaabaa inuu kaliya jeclaado cuntada inta ay ku jeclaan doonaan. Eyga weyn ee firfircoon had iyo jeer wuxuu leeyahay hamuun weyn ee is diyaari.
Immisa ayuu cunaa Sheprador?
Celcelis ahaan, eey weyn, caafimaad qaba oo firfircoon wuxuu u baahan yahay 30 kaloori halkii rodol oo miisaanka jidhka ah maalintii. Noocan iskutallaabtu waa inuu cuni doonaa laba illaa saddex koob oo kibble qalalan oo tayo sare leh maalintii. Tan waxaa lagu xisaabin karaa iyadoo la adeegsanayo jadwalka hoose:
Kaloriinta maalinlaha ah
Dheddig 35 - 45 rodol 1050 - 1350 kalori
Lab 45 - 95 lb 1350 - 2850 kalori
Sidaad arki karto, lab Jarmal Shepherd Mix Lab wuxuu ubaahanyahay kalooriyo kabadan tan dumarka sababo laxiriira cabirkooda. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la xasuusto in xitaa ragga ay ku kala duwanaan doonaan cabirkooda, sidaas darteedna kaalmada kalooriga ay tahay in loo waafajiyo si waafaqsan. Tani sidoo kale waa run inta lagu jiro wejigooda iyo koritaankooda .
Intaa waxaa sii dheer, shuruudaha kalooriga ee ardaygaaga ayaa laga yaabaa inay isbeddelaan iyagoo ka jawaabaya kala duwanaanshaha da'dooda, cabirkooda iyo heerarkooda waxqabad.
Waxaa jira qaabab kibib qalalan oo tayo sare leh kuwaas oo si gaar ah loogu sameeyo eyda waaweyn. Cuntooyinkan waxaa loo sameeyay inay ka kooban yihiin xaddiga saxda ah ee borotiinnada iyo dufanka uu u baahan yahay eygaaga weyn si ay u ilaashadaan tiradooda adag.
Cunnooyinka waa in lagu kala qaadaa in ka badan caawi dheefshiidka saxda ah , oo yaree fursadaha bloat .
Laba cunto ayaa loo kala qaadi karaa quraac iyo casho. Ka fikir sida abaalmarin kadib jimicsigaas iyo tamartaas oo dhan.
Isagoo ka hadlaya abaalmarinta, in kasta oo laga yaabo inay kugudareyso inaad siiso cunuggaaga cunugga ah ee aadka u jecel cuntadaada iyo daaweynta; fadlan haka yeelin.
Hal waalid oo asal ah, Labrador, ayaa u nugul miisaanka oo kordha iyo buurnida sidaa darteedna ay muhiim tahay in noocani aanu ka badnayn in la quudiyo; ku dhaji cuntooyin fudud oo caafimaad qaba .
Celcelis ahaan, Sheprador wuxuu u baahan yahay ugu yaraan hal saac oo jimicsi ah maalintii; maalmaha qaar oo ku raaxeysanaya dhowr saacadood.
Jimicsiga Adhijirkaaga Jarmalka iyo Shaybaarka Isku-dhafka ah waa inuu ka koobnaadaa orod badan iyo ciyaar adag. Haysashada daarad weyn oo waasac ah ayaa markaa faa'iido leh. Haddii tani aysan adiga ku qancin, markaa maxaad uga dhigan weysay ilmahaaga lammaanahaaga cusub ee socodsiinaya?
Isku day inaad Eygaaga u qaadato waxoogaa muuqaal dabiici ah oo ku teedsan wabiga xaafaddaada ama baarkinkaaga, ama maxaad ugu istaagi weyday baarkinka shaqada ka dib? Eygaaga iyo caruurtaada labaduba waxay heli doonaan waqtigooda aadka loogu baahan yahay ee ciyaarta si ay u gubaan tamartooda oo dhan si loo xaqiijiyo fiidnimo dabacsan oo si fiican ugu qalantay dabka.
Jimicsi la aan, eygaaga waxaa laga yaabaa inuu nasto oo caajiso oo xitaa ka sii darmo, caajis iyo cayilan; taas oo yareeyo tayada noloshooda .
Tababbarka eey kasta ma fududa, si kastaba ha noqotee, isku-darka naqshadeeyahaan ayaa noloshaada ka dhigaya wax yar oo fudud maadaama labadaba Shepherd-ka Jarmalka iyo Labrador ay yihiin noocyo caqli iyo dadaal badan oo jecel inay ka farxiyaan.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ku tababarto eeygaaga waa adiga iyo wanaagga ol ’xoojinta wanaagsan. Dabcan, eeygaaga sidoo kale. tababarka sal-ku-saleysan ayaa laga takhalusay sidaas darteedna waa in aan la isticmaalin.
Ku abaal mari eygaaga inta lagu jiro dabeecadda wanaagsan adoo ku daaweynaya, kalgacal ama alaabta lagu ciyaaro. Adiga ayay ku xiran tahay inaad go'aansato nooca abaalmarinta eeygaaga wax u qabanayo. Waxaad sidoo kale tijaabin kartaa tan sidoo kale .
Xeeladda tababarka eeygaaga ayaa ah in la isku daro kicinta maskaxda iyo jimicsi wadajir ah. Tani waxay eygaaga ku mashquulineysaa oo uu ka feejignaanayaa nidaamka barashada wuxuuna u rogi doonaa waqtiga tababarka waqti dheeri ah oo ciyaar ah.
Fikradaha Wanaagsan ee Kicinta Maskaxda
Maxaad isku dayi weyday inaad ka soo qayb gasho tayadan xoogaa xiiso leh, ciyaaro is-dhexgal ah. Ciyaar fudud oo la soo qaado samayn doonaa trick ah.
Si fudud u bax oo u soo iibi ilmahaaga kubad saaxiibtinimo eey ah, tuur kubbadda, oo daawada cabsida markay sii ordayaan si ay u soo qabtaan kubbadda dib loo soo ceshado; ku celi!
Kicinta maskaxda waxaa lagu bixin karaa siyaabo ka badan intaad moodeyso. Waad beddeli kartaa waddooyinka socodka / socodka, u kaxee meelo cusub oo aan la aqoon oo waxaad daawan kartaa iyagoo si xamaasad leh u qaadaya jawiga cusub dhammaantood.
Bulsheynta astaamahan ayaa ah mid aad muhiim u ah, gaar ahaan dabeecadda ilaalinta waalidkood ee reer Jarmalka ah. Sababtaas awgeed, is dhexgalka bulshada ayaa sidoo kale muhiim u ah ardaygaaga. Isku darkaaga waa inuu la qabsadaa la kulanka dad cusub da 'yar si uusan ugu walwalin jawiga isbedelaya. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa Sheprador inuu noqdo qof saaxiibtinimo leh oo si wanaagsan loo tababaray.
Isku darkaaga ayaa lahaan doona cimri dhan 10 ilaa 12 sano isku celcelis. Inkasta oo eeyaha naqshadeeyayaasha badanaa loo soo saaray inay soo saaraan isku dhafka ugu fiican ee noocyada leh dhibaatooyinka caafimaad ee ugu yar, haddana weli nasiib darro waa laga dhaxli karaa. Sheybaarka Shepherd Mix Lab ayaa lagu yaqaan inuu la xanuunsanayo Dysplasia iyo Bloat.
Aad u cudurka lafaha guud laga helay Adhijirka Jarmalka; taas oo ahayd mid ka mid ah sababaha Adhijirka reer Shiiloh wuxuu ahaa farcan. Waa cillad ku timaadda kala-goysyada eeyga oo sababi kara xanuun iyo caabuq.
Canine dysplasia wuxuu ku bilaaban karaa da'da hore ama ka weyn. Haddii aan la daaweyn, ilmahaaga wuxuu ku jiri doonaa xanuun daran oo xitaa wuxuu u baahan karaa daaweyn qalliin.
Volvulus Dildilaaca caloosha (yacni Bloat)
Bloat wuxuu dhacaa marka caloosha canine-ka ay weynaato iyadoo laga jawaabayo cunto ballaaran. Halkii laga saari lahaa gaaska sida caadiga ah, wuxuu noqdaa xayiran, cadaadis ayaa markaa la dhisaa oo xanuun keena. Maaddaama Labradors ay yihiin laabta qoto dheer, waxay u nugul yahiin inay ubax yeeshaan. Waa muhiim inay iyagu hubiyaan in ilmahaagu aanu si dhakhso leh u cunin cuntadooda. Haddii aad aragto in ubadkaaga uu ku jiro raaxo la'aan, markaa ha ka waaban inaad la xiriirto takhtarkaaga xoolaha.
Ha u oggolaan in cabbudooda weyn ay kaa nixiso, noocani waa jilicsanaan weyn!
Eygaaga ayaa laga yaabaa inuu u weynaado sida Adhijirka Jarmalka ah, ama wuxuu u ekaan karaa baaxadda Labrador. Dheddigga ayaa culeyskiisu noqonayaa meel kasta oo u dhexeysa 35 illaa 45 rodol oo labkuna guud ahaan wuu ka ballaadhan yahay 45 illaa 90 rodol. Dhererka qallajintoodu badanaa waa qiyaastii 20 illaa 26 inji.
Waxaa loo kala saaraa sida ey dhexdhexaad dhexdhexaad ah u leh, culeyskiisuna yahay 35 ilaa 95 rodol, eygaagu wuxuu yeelan doonaa muzzle dhexdhexaad ah ama dheer leh iyo figrad adag oo geesinimo leh.
Dhego gaaban, feejignaan iyo fiiqan sida kuwa Adhijirka Jarmalka ah, ama dhagaha jilicsan oo hoos u dhacaya sida kuwa Labrador. Muuqaalka Isku-darkaaga Shepherd Lab Mix wuxuu si aad ah ugu kala duwanaan doonaa ka pup ilaa pup lamana saadaalin karo.
Sida tan tahay naqshadeeyaha ey , Eygan jaangooyooyin nooc ah ma leh; muuqaalka wuxuu u ekaan karaa midkood Adhijirka Jarmalka ama Labrador.
Indhahoodu way dhalaali doonaan xitaa kuwa qalbiga ugu qabow. Weyn iyo bunni, xaqiiqdii way ku adag yihiin inaadan jacayl ku dhicin!
Sheybaarka isku dhafka ah ee loo yaqaan 'Lab Mix German Shepherd' wuxuu leeyahay jaakad gaaban, oo laba jibbaar ah, oo leh midabbo u dhexeeya tan ilaa bunni ilaa ciid iyo xitaa ilaa madow ( laga bilaabo GSD madow ).
Labada nooc ee waalidku waxay daadiyeen timo badan; gaar ahaan xilliga gu’ga iyo deyrta. Inta lagu jiro muddadan, ardaygaagu wuxuu isku diyaarinayaa jiilaalka ama jiilaalka iyo jaakaddiisa xagaaga si waafaqsan.
Xajista eeygaaga si joogto ah waxay kaa caawin doontaa yareynta timaha eyga ee aan loo baahnayn inay guriga ku soo ururaan. Si loo yareeyo daadinta xad dhaafka ah, iskuday inaad cadayato eeygaaga laba jeer ama ka badan usbuucii. Waxaa lagugula talinayaa inaad bilowdo cadayashada ilmahaaga da 'yar.
Isku day inaad u maydho eeygaaga bil kasta, laga yaabee shaambada guriga lagu sameeyo . Ciddiyaha oo si joogto ah loo jaro ayaa sidoo kale lagu talinayaa. Sidoo kale, ha ilaawin ilkaha eygaaga. Isku day cadayasho maalin walba ama si fudud u siiso daaweyn ilkaha.
Marka, carruurtaadu miyay bilaabeen inay kaa baryaan a German Shepherd Lab Mix weli?
Ey caqli badan, tababar-fudud, ciyaar iyo daacadnimo ey isku-dhafan leh tilmaam ilaalin. Tani waa tan ugu fiican ee qoyskaaga iyo carruurtaada.
Haddii aad leedahay barxad waasac ah, qoys firfircoon, iyo jacayl badan oo aad siiso markaa tixgeli Laanta Shepherd Labrador Cross ee Jarmalka inay tahay canine kaamil ah.
Saaxiib hagaagsan oo socodsiiya, maskaxda ku haya cunugga iyo xubin qoyska ka mid ah. Ka faallee hoosta oo noo sheeg sheeko qalbi-diirinta leh oo adiga iyo adhijirkaaga Jarmalka Shepherd Labrador.
Macluumaadka Taranka Noocyada 'Husky Lab Mix': Qiimaha, Eeyaha iyo Muuqaalka
waa maxay aussie mini
noocyada kala duwan ee eeyaha pitbull
eyga qallayl iyo matag
anatomy ee eyga